China Lighting ifektri kanye nabaphakeli | Isi-Donghua
Izinto ezisetshenziswa kakhulu ekukhanyeni izinhlelo ziyi-acrylic ne-polycarbonate. Imikhiqizo yethu ye-acrylic ingasetshenziselwa ukwakha amalensi acacile noma asakazwayo kuzinhlelo zokusebenza zokukhanyisa zokuhlala, ezokwakha nezentengiso. Ungakhetha emikhiqizweni yethu ye-acrylic ukuhlangabezana nezidingo zobuchwepheshe nezokubonakalayo zephrojekthi yakho.
Iphaneli yomhlahlandlela wokukhanya (LGP)
• Izibani zokuhlala
• Ukukhanya kwezebhizinisi
Izinto ezisetshenziswa kakhulu ekukhanyeni izinhlelo ziyi-acrylic ne-polycarbonate. Ama-plexiglass e-Acrylic namashidi e-polycarbonate womabili amashidi epulasitiki aqinile futhi aqinile anamathuba okubuka phezulu. I-DHUA ikakhulukazi inikezela ngamashidi e-acrylic wohlelo lwakho lokukhanyisa.
Ibanga lethu le-acrylic elibonakalayo lisetshenziselwa ukwenza i-Light Guide Panel (LGP). I-LGP iyi-panel ye-acrylic esobala eyenziwe nge-100% ye-Virgin PMMA. Umthombo wokukhanya ufakiwe onqenqemeni lwawo. Kwenza ukukhanya okuvela emthonjeni wokukhanya ngokulinganayo phezu kobuso bonke obuphezulu beshidi le-acrylic. Iphaneli Yomhlahlandlela Wokukhanya (i-LGP) yathuthukiswa ngokukhethekile izimpawu nezikhanyisi ezinqenqemeni, okunikeza ukukhanya okuhle kakhulu nokukhanya kokukhanya.